Maxaa looga hadlay kulankii uu R/W Rooble la qaatay xubnaha beesha caalamka? | Xaysimo
Home War Maxaa looga hadlay kulankii uu R/W Rooble la qaatay xubnaha beesha caalamka?
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga kulan kula yeeshay wakiilada beesha caalamka sida lagu baahiyay qoraal lasoo dhigay barta facebook ee xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ra’iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ku bogaadiyeen kaalintii uu ku lahaa is fahamkii uu la gaaray midowga musharaxiinta kadib shir ay yeesheen 25-kii February.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay wakiillada beesha caalamka, kaas oo looga hadlay sii wadista wada xaajoodyada DFS iyo Dowlad-goboleedyada ee la xiriira hirgalinta heshiiskii 17-kii September 2020 iyo qodobbadii Guddigii farsamo ee Baydhabo.Shirkan ayaa sidoo kale lagu bogaadiyay isfahamkii ka soo baxay shirkii Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Musharixiinta ee 25-kii Febraayo.